Toamasina : nanolotra fitaovam-panjonoana Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Toamasina : nanolotra fitaovam-panjonoana Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy
Mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny velon-tenan’ny mponina any amin’ny faritra iasany ny Tetikasa Ambatovy. Notolorany fitaovana sy kojakoja ilaina amin’ny jono ny fikambanan’ny mpanjono dimy any Toamasina, ny 27 sy 28 jolay teo. Nahazo tombontsoa tamin’izany ny mpanjono miisa 120 ao amin’ny fokontany Ambodisaina Ivondro sy Analakinina.
Nizarana salotraina 80 izy ireo, miampy harato 160 sy ny kojakoja miaraka aminy, vata fampangatsiahana 16. Mitentina 10,5 tapitrisa Ar. ireo fitaovana ireo, avy amin’ny Tahiry ho an’ny asa sosialy ao amin’ny Tetikasa Ambatovy. Tanjona ny hanatsarana sy hampiakarana ny fidiram-bolan’ny mponina, hisian’ny fampandrosoana isan-toerana.
Fanentanana amin’ny tontolo iainana
Eo amin’ny lafiny tontolo iainana, nanao hetsika fanentanana hiarovana ny tontolo iainana ny tetikasa Ambatovy. Voakasik’izany ny mponina maherin’ny 900 ao amin’ny fokontany dimy (Ampitambe, Befotsy,Marovoay, Menalamba, Ambodiakatra) miampy vohitra kely 24, samy manodidina ny toeram-pitrandrahana any Ambatovy Moramanga, ny volana mey hatramin’ny jolay teo. Tafiditra tao anatin’ny fanentanana ny fampahafantarana sy ny famaliana ny fanontaniana manodidina ny lohahevitra hoe “ny fihazana sy ny fandrika”, “ny fanapahana ny hazo sy ny saribao”, “ny afo sy ny fanalana ala”. Nampahafantarina azy ireo koa ny lalàna sy ny fepetra amin’ny fitantanana ny harena voajahanary.